Fanesorana makiazy tsy misy famafana - Ny dingana sy vokatra tsara indrindra | Bezzia
Ahoana ny fomba fanesorana makiazy tsy misy mamafa
Susana godoy | 19/07/2021 10:00 | beauty
Ny fanesorana makiazy tsy misy solooka dia azo atao sy miaraka amin'ny vokatra fantatsika. Satria na dia iray amin'ireo fomba tsotra indrindra hanaovana veloma ny makiazy aza ireo dia tsy hanao dingana tsara hanohitra ny hodintsika foana isika. Noho izany, tsy misy toy ny filokana amin'ny safidy hafa.
Satria ankoatry ny fanaovana veloma ny makiazy dia mila miloka amin'ny hoditra salama koa isika ary noho izany dia zava-dehibe ny fanarahana ireo dingana marina. Tsy ny iray ihany no ho hitantsika, fa maro amin'ireo dingana ireo mba hahamora kokoa anao ny manao veloma ny makiazy sy manao veloma ny hoditra miraharaha kokoa.
1 Esory ny makiazy fa tsy mamafa, fa amin'ny rano micellar
2 Ronono manadio
3 Menaka fanesorana makiazy
4 Ny spaonjy Konjac
5 Maninona raha esorina ny makiazy amin'ny famafana
Esory ny makiazy fa tsy mamafa, fa amin'ny rano micellar
Na dia misy aza ny vokatra eto hijanona dia ny rano micellar. Izany no mahatonga ny maro amintsika hamela ny famafana ho azy. Ny endriny amin'ny endrika rano, araky ny anarany dia manala ny makiazy amin'ny lalan-tokana. Izy io dia mety amin'ny tarehy iray manontolo nefa koa amin'ny maso. Azonao esorina amin'ny baolina landihazo izany ary ataovy haingana sy mora kokoa ny fizotrany. Ankoatry ny fanesorana makiazy, dia manalefaka ihany koa izy io, mandoko ary manatsara ny hoditra, nefa tsy manadino ny vokany mamontsina aterak'izany. Noho izany rehetra izany dia iray amin'ireo filokana mafy orina kaonty.
Raha ny rano micellar dia natolotra ho revolisiona tanteraka, ny ronono manadio dia iray amin'ireo vokatra fototra indrindra fa tsy latsa-danja kokoa. Ankoatry ny fanadiovana dia mando be izy io. Noho io antony io dia tsy ho maina izy fa ny mifanohitra amin'izay no izy. Izy io dia mety tsara amin'ny hoditra maina noho io antony io, fa koa ho an'ny saro-pady indrindra. Ankoatry ny famelana azy ireo hadio, dia hanome azy ireo ny fikitika malefaka indrindra koa izy noho ny fanondranana azy.
Menaka fanesorana makiazy
Na dia mety tsy iray amin'ireo safidy voalohany tokony hodinihina aza dia tokony holazaina izany ny menaka dia manome vitamina marobe antsika ary mazava ho azy, hydration be dia be koa ho an'ny hoditsika. Izany no antony hikarakarantsika azy amin'ny farany farany azontsika atao ny miloka amin'izy ireo. Jojoba na menaka amandy dia tsy mety ho foana ao an-tranontsika. Satria voajanahary izy ireo ary satria miaraka amin'ny latsaka vitsivitsy monja dia ho ampy isika. Raha manana hoditra maina ianao dia ho tonga lafatra ho anao koa izy ireo.
Ny spaonjy Konjac
Azo antoka fa fantatrao ihany koa izy io satria lasa iray amin'ireo zavatra tena ilaina. Izany no antony tokony hasiana azy ao anaty kitapo fanaingoanao koa. Azonao antoka fa efa fantatrao izany azo ampiasaina amin'ny vokatra na irery. Multiplepose ity spaonjy ity ary izay no antony itiavany azy indrindra. Raha mandena azy ianao dia hihamalefaka ary ho mora kokoa aza ny manala ny makiazy. Ho fanampin'izany, miankina amin'ny karazana hoditra anananao dia afaka misafidy safidy isan-karazany ianao amin'izany.
Maninona raha esorina ny makiazy amin'ny famafana
Ny marina dia aorian'ny fahitana ireo safidy ireo dia mitarika antsika hiresaka fa ny fanesorana makiazy tsy misy solooka dia azo atao. Ny marina dia raha manao an'io dingana io ianao indraindray dia tsy hisy izany. Fa ny fampiasana azy ireo hatrany dia mety tsy hanadio tsara ny hoditrao. Inona hiteraka sakana sy hiseho ny mainty ary ny karazany rehetra. Noho ny fitambaran'izy ireo dia azon'izy ireo atao ihany koa ny manao ny hoditra ho maina kokoa, indrindra izay manana hoditra tsy voatsiranoka tsara. Noho izany dia tsy maintsy faranantsika araka izay azo atao ny fampiasana azy ary misafidy ireo vokatra etsy ambony ankoatry ny fanadiovana ny hoditra amin'ny rano, izay fanafody tsara foana. Ary ianao? Mampiasa hamafa soloina makiazy ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Ahoana ny fomba fanesorana makiazy tsy misy mamafa
Dietin'ny volana, inona izany ary ny fomba fiasan'izy io
Inona no atao hoe fanondrotana volomaso